Qubanaha » TV-ga Caalamiga ah ee Al Jazeera oo Dhibaato kala kulmaya Xiisada ka aloosan Wadamada Khaliijka
TV-ga Caalamiga ah ee Al Jazeera oo Dhibaato kala kulmaya Xiisada ka aloosan Wadamada Khaliijka
Qubanaha.net-Muqdisho-Telefishinka Caalamiga Al Jazeera ayaa dhibaato xoogan kala kulmaya Xiisada siyaasadeed ee ka taagan Wadamada Khaliijka, waxaana daawashada Telefishinkaasi laga mamnuucay Wadamo dhoor ah oo Khaliijka Carabta kuyaala.
Al Jazeera ayaa sidoo kale wajahaya weeraro dhinaca Interneka uga imaanaa iyo kuwa kale, waxaana hada hawada laga saaray Barta uu Twiterka ku lahaa Telefishinkaasi sida ay shaaciyeen Madax katirsan maamulka Telefishinkaasi.
Warbaahina Khaliijka qaarkood gaar ahaan kuwa kasoo horjeeda dowlada Qadar aaa baahiyay in Bogga Twitterka ku lahaa Teklefishinka Al Jazeera in la xiray kadib markii lagu eedeeyay in u taageero waxa loogu yeero Argagaxisada.
Agaasimaha guud ee Al-Jazeera Yasir Abuu Hilaala ayaa sheegay in la is taajiyay bogga rasmiga ah uu Tiwitterka ku lahaa Al jazeera, waxa uuna intaa raaciyay in wali shaqeenayaan bogag kale oo hoos taga bogaasi.
Dowlada Qadar ayaa lagu soo rogay xayiraad dhinacyo badan leh, waxaana Xayiraada dowldaasi lagu soo rogay ay saameesay Telefishinka Al Jazeera oo kamid ah kuwa caalamka loogu daawashada badan yahay iyo Shirkada Diyaaradaha Qadar Airways.